War Deg Deg Ah:Kurdida oo la heshiiyey Xukuumada Bashar Al Assad – KHAATUMO NEWS
War Deg Deg Ah:Kurdida oo la heshiiyey Xukuumada Bashar Al Assad
Xoogaga Kurdida Siiriya oo maalmihii lasoo dhaafay duulaan culus uga yimid dhanka Militariga Turkida ayaa heshiis la galay Xukuumada Bashar Al Assad oo uu horey dagaal uga dhaxeeyey.
Heshiiskan ayaa qoraya in Xukuumada Bashar Al Assad ay ciidamadeeda keento Waqooyiga Siiriya halkaasi oo ay horey uga talin jireen xoogaga Kurdida oo 4tii maalmood ee lasoo dhaafay dagaal xoogleh kula jiray ciidamada Turkiga iyo xulafadooda oo gudaha usoo galay gobalada waqooyiga.
Ciidamada Turkida oo ay gacan siinayaan maleeshiyaad u badan Carabta Siiriya ee mucaaridka ah ayaa la wareegay goobo muhiim ah oo ay ku jiraan magaalooyinka Tal Abayad iyo Magaalada Ras Al-Ayn, waxay sidoo kale ciidamadan qabsadeen Wadada weyn ee isku xirta Galbeedka iyo Bariga Siiriya.
Dhaq dhaqaaqa Kurdida oo aan u babac dhigi karin cududa militari ee Turkiga ayaa ka codsaday taageero Dowlada Ruushka oo kula talisay inay la heshiiyaan Xukuumada Siiriya ee Bashar Al Assad.
Hadii ciidamada Bashar Al Assad ay soo galaan waqooyiga Siiriya waxaa meesha ka baxeysa qorshihii ay ku haminayeen Kurdida oo ahaa inuu sii jiro Ismaamulkooda Waqooyiga Siiriya, balse waxaa xiligan uga weyn cabsi ay ka qabaan xasuuqa uga imaan kara Turkida oo uu ka dhaxeeyo dagaal taariikhi ah.
Dhulka Waqooyiga Siiriya ayaa ah mid muhiim u ah Dowlada Bashar Al Assad maadaama ay ku yaalaan xarumaha shidaalka laga soo saaro, halka Turkida ay dooneyso inay cagta mariso xoogaga Kurdida oo ay ka cabsi qabto in maamul ay ka dhistaan Waqooyiga Siiriya ay sii dhiiri geliso Malaayiinta kale ee Kurdida ku nool gudaha Turkiga oo iyaguna gooni u goosad ku dhawaaqa.
Militariga Turkiga ayaa hawlgalkooda bilaabay asbuucii lasoo dhaafay kadib markii is-afgarad dhexmaray Madaxweynaha Maraykanka Trump iyo Madaxweynaha Turkiga Erdogan lagu heshiiyey in Ciidamada Maraykanka ee gacanta siin jiray Kurdida Siiriya dhulkaasi laga saaro taasi oo wadada u baneesay in Turkiga uu xoog kusoo galo dhulka Kurdida maamusho ee wadanka Siiriya.
Previous Post: Deg Deg:Sarkaal Lagu Dilay Kismaayo,
Next Post: Deg Deg Daawo::”Somaliland Dhankasta Markay Soo Oodantay Ayaan IS Casilay”